आजको दिन यी राशिहरुको लागी छ शुभ, कुन राशिलाई छ अशुभ? - Samaya Sandarva
आजको दिन यी राशिहरुको लागी छ शुभ, कुन राशिलाई छ अशुभ?
सोमबार, चैत्र १८, २०७५ १०:३७ - समय सन्दर्भ
आज पापमोचिनी एकादशी । भनिन्छ आजको दिन एकादशीको व्रत बस्नाले व्यक्तिको हरप्रकारको परेशानीबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ।
आज तपाईंको सोचेको काम पूरा हुनेछ। सहयोगीले तपाईंलाई कार्यालयमा मद्दत गर्न सक्छन। स्वास्थ्यको मामलामा आफूलाई ऊर्जावान महसुस गर्नुहुनेछ। आज तपाई आफ्नो करिअरको बारेमा चिन्तित हुनुहुनेछ। तपाईंको सम्पत्तिमा वृद्धिको सम्भावना छ। शिवलिङ्गमा जल चढाउनुहोस आँटेका सबै काम पुरा हुनेछन।
आज कार्यालयमा तपाईलाई सजिलै पूरा हुनेकाम दिइने छ। आज तपाईसँग कुनै विशेषज्ञको रूपमा सल्लाह लिन सकिन्छ। तपाईंको वैवाहिक जीवनमा सुधार आउने छ। यस राशीका व्यापारीलाई आज काममा नयाँ अनुभव प्राप्त हुनेछ। आयको नयाँ स्रोत फेला पर्नेछ। अचानक केहि अतिथिहरू घर आउन सक्छन्, घरको वातावरणमा केहि परिवर्तन हुनेछ। मन्दिरमा फलफूल चढाउनुहोस, धनलाभ हुनेछ।
आजको दिन यात्रामै बित्न सक्छ। यात्रा अफिस रिलेटेड हुन सक्छ। आज तपाईं मजाकको मूडमा हुनुहुनेछ। पुराना मित्र भेटिन सक्छन। दैनिक जीवनमा नयाँपन आउन सक्छ। विष्णु जीको अगाडी घ्युको दिप जलाउनुहोस, यात्रा सुखद रहने छ ।
आज तपाईले आफ्नो खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। चाँडै निर्णय लिनबाट बच्नुहोस। यस राशिका लेखकलाई आज प्रशंसा मिल्नेछ। तपाईंलाई आज कुनै संस्थाद्वारा सम्मानित गरिन सक्छ।आमाबाबुको आशीर्वादले तपाईंलाई गन्तव्यमा पुग्न मद्दत गर्नेछ। असहायलाई खाना बाड्नुहोस, तपाईंको स्वास्थमा सुधार आउनेछ।
परिवारसंग समय विताउनु हुनेछ। घरको वातावरण सुखद हुनेछ। आर्थिक अवस्था सामान्य रहनेछ। नयाँ कामको थालनी हुन सक्छ। आमाबाबुको आशीर्वाद लिनुहोस, सबै समस्या समाधान हुनेछन।
आज तपाईको झुकाव आध्यात्मतिर हुनेछ। तपाईंले सबै काममा सफलता पाउनुहुनेछ। आज तपाई कार्यस्थलमा केहि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, यसले तपाईंलाई लाभ पुऱ्याउँछ। परिक्षार्थीको परीक्षा राम्रो हुनेछ। परिवारमा राम्रो हुनेछ। प्रेम जोडीका लागी आजको दिन उत्तम छ।सामाजिक मेलजोलको अवसर प्राप्त हुनेछ। विष्णुजीलाई पहेलो फूल चढाउनुहोस, घरमा खुशी रहनेछ।
तपाईंको नजिकको मित्र आज तपाईलाई भेट्न आउन सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीहरुको लागि आजको दिन उत्तम रहेको छ।पढाइमा आइरहेका बाधा हटेर जाने छन। नतिजाको ख्याल नराखी काममा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस। बुजुर्गको सल्लाह लिनुहोस। शिव मन्दिरमा नरिवल चढाउनाले सबै ठीक भएर जानेछ।
आज जे काम हातमा लिनुहुन्छ ,पुरा गरेर छाड्नु हुनेछ। कामको गतीले लय समात्ने छ। यस राशिका अविवाहितहरुलाई ‘लाइफ पार्टनर’ भेटिन सक्ने योग रहेको छ। मन्दिरमा इलाईची चढाउनाले कार्य पुर्ण हुनेछ।
आज मानिसहरूले तपाईंको शब्दहरूमा पूर्ण ध्यान दिनेछन्। यात्रा योजनाहरू बन्न सक्छन । केहि असामान्य परिस्थितिको आज समाधान हुनेछ। दिनभर मस्ती हुनेछ, भाग्यले साथ दिएको छ। तपाईंको व्यवहारको प्रशंसा गरिनेछ। महत्त्वपूर्ण कामको उच्च प्रशंसा हुनेछ।ॐ नम: शिवाय मंत्र ११ पटक जप गर्नाले पतीपत्नी बिच समबन्ध सुमधूर हुनेछ।
जीवनमा नयाँ मोड आउन सक्छ। करिअर समबन्धी ठुलो निर्णय लिनु पर्ने देखिन्छ। कार्य व्यस्तताले परिवारलाई समय दिन सक्नुहुन्न। नयाँ व्यवसायका लागी कसैसँग उधारो लिनुपर्ने हुन्छ। गाइलाई रोटी ख्वाउनाले काम सही ढंगले पुरा हुनेछ।
जीवनसाथीबाट सुसमाचार मिल्ने छ। परिवारमा खुशियाली छाउने छ। सम्बन्ध र कामको बीच राम्रो तालमेल मिल्नेछ।आर्थीक स्थिती बलियो हुनेछ। इन्जिनियरहरूलाई ठूलो फाइदा हुने देखिन्छ। शिव चालीसा पाठ गर्नुहोस्, जीवनमा खुशियाली छाइरहने छ।
आज कार्यालयमा सहयोगीहरूको सहयोग पाउनुहुनेछ। तपाईंको अधुरा काम पुरा हुनेछन। तपाईंको सकारात्मक विचारले व्यक्तिलाई प्रभाव पार्नेछ। तपाईंको सहयोग अरूलाई लाभदायक हुनेछ। कठिन विषय बुझ्न अरुको मद्दत लिन सक्नुहुन्छ। घरायसि काममा जीवनसाथीको सहयोग मिल्नेछ। तुलसीको मठमा घ्युको दियो बाल्नाले सबैको साथ मिल्नेछ।